January 2022 - Dokonetwork
မန္တလေးမှာအသံတိတ် သပိတ်ပျက်ဖို့ အာဏာလုစစ်ကောင်စီရဲ့အကြံဆိုး
January 31, 2022 dokonetwork2021 0
မန္တလေးမှာအသံတိတ် သပိတ်ပျက်ဖို့ အာဏာလုစစ်ကောင်စီရဲ့အကြံဆိုး အသံတိတ်သပိတ် ရှေ့တန်းမျက်နှာစာတွေဖြစ်တဲ့ မန္တလေးမှာ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးအသံတိတ်သပိတ် မအောင်မြင်ဖို့အတွက် စစ်ကောင်စီက နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ အကြံဉာဏ်ထုတ်နေပါတယ်။ အသံတိတ်သပိတ် ကျင်းပပေမယ့် လမ်းတွေပေါ်မှာ လူတွေစည်ကားနေတဲ့ပုံရိပ်ပြလို့ရအောင် စစ်ကောင်စီဟာ စီစဉ်နေတာပါ။ အဲဒီအစီအစဉ်တွေထဲမှာ ပုဂ္ဂလိက ဆီဆိုင်တွေမှာ ဆိုင်ကယ်တွေကို တစ်လီတာ ဆီအလကားဖြည့်ပေးမယ့် အစီအစဉ်အပြင် လမ်းမကြီးတွေမှာ စစ်ကောင်စီက လုံခြုံရေးပေးပြီး သူတို့ကိုထောက်ခံပွဲတွေ လုပ်ဖို့ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါအပြင် ဒီနေ့မှာ ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းပြီး မနက်ဖြန် […]
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ (ကာလုံ) အစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက် ဒီကနေ့ ခေါ်ယူကျင်းပပြီး စစ်တပ်အာဏာသိမ််း သက်တမ်းကို နောက်ထပ် ၆ လ ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ (ကာလုံ) အစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက် ဒီကနေ့ ခေါ်ယူကျင်းပပြီး စစ်တပ်အာဏာသိမ််း သက်တမ်းကို နောက်ထပ် ၆ လ ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးသို့ ယာယီသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ စစ်ကောင်စီခန့် ဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး […]
မြိုင် ကလည်းကြေညာပြီ FEB,10နောက်ဆုံး Nonတွေ ထွက်ခွါကြရန် အမိန့်ထုတ်👇
တိုက်ပွဲအရှိန်မြှင့်မှာဖြစ်လို့ မြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ကိုစွန့်ပြီး ထွက်ခွာဖို့ မြိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သတိပေး RiSE News | ဇန်နဝါရီ ၃၁ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ပါးစေ စစ်တပ်ကို အရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်လို့ မကွေးတိုင်း၊ မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းက စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီး မြို့နယ်အတွင်းကအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားကြဖို့ မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ဒီကနေ့မှာ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ရက်နေ့မတိုင်ခင် စစ်ကောင်စီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေ မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းက အလုပ်ထွက်ပြီးအပြီးတိုင် ထွက်ခွာသွားဖို့ကို မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ မလိုက်နာရင် မြိုင်မြို့နယ် […]
အသံတိတ်သပိတ် ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ဆင်နွဲကြပါစို့ ဗိုလ်နဂါး တိုက်တွန်း နှိုးဆေ်
“နွေဦးတော်လွန်ရေး နွစ်ပတ်လည်” အသံတိတ်သပိတ် ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ဆင်နွဲကြပါစို့ ဗိုလ်နဂါး တိုက်တွန်း နှိုးဆေ် 🤜🤛💪💪💪 “ေႏြဦးေတာ္လြန္ေရး ႏြစ္ပတ္လည္” အသံတိတ္သပိတ္ ျပည္သူအားလုံးပါဝင္ဆင္ႏြဲၾကပါစို႔ 🤜🤛💪💪💪 “နွေဦးတော်လွန်ရေး နွစ်ပတ်လည်” အသံတိတ်သပိတ် ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ဆင်နွဲကြပါစို့ 🤜🤛💪💪💪 “ေႏြဦးေတာ္လြန္ေရး ႏြစ္ပတ္လည္” အသံတိတ္သပိတ္ ျပည္သူအားလုံးပါဝင္ဆင္ႏြဲၾကပါစို႔ 🤜🤛💪💪💪 “ေႏြဦးေတာ္လြန္ေရး ႏြစ္ပတ္လည္” အသံတိတ္သပိတ္ ျပည္သူအားလုံးပါဝင္ဆင္ႏြဲၾကပါစို႔ 🤜🤛💪💪💪 “နွေဦးတော်လွန်ရေး နွစ်ပတ်လည်” အသံတိတ်သပိတ် ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ဆင်နွဲကြပါစို့ 🤜🤛💪💪💪 “ေႏြဦးေတာ္လြန္ေရး […]
၁.၂.၂၀၂၂ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာနားကနေ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဥက္ကာခဲကြီးတစ်ခုဖြတ်ပျံမယ်လို့ NASA က ကြေငြာပါတယ်။ ဖြတ်သန်းချိန် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀နါရီမှ ညနေ၄နာရီအတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံပေါ်က ဖြတ်သန်းနိုင်သည်ဟု ပြောကြားထားပါတယ္။ ကြီးလွန်းလို့ ဒိုင်နိုဆောတွေကိုမျိုးတုန်းစေခဲ့တဲ့ ဥက္ကာခဲအရွယ်နီးပါးရှိပါတယ်တဲ့။သူ့ဆီက ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆွဲအားဟာ ကမ္ဘာကိုသက်ရောက်မှာဖြစ်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ အိမ်အပြင်သိပ်မထွက်ကြဘဲ၊ အိမ်မှာနေခြင်းဖြင့် အသက်ဘေးကို ထိခိုက်နိုင်ချေလျော့ချနိုင်ကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂအာကာသအေဂျင်စီကကြေငြာထားပါတယ်။ ဥက္ကာခဲအန္တရာယ်ကကြီးတာမို့ အိမ်မှာဘဲ […]
စစ်​ကောင်စီတပ်အထိနာခဲ့​သော အင်ပင်ထီးရွာ တိုက်ပွဲရုပ်သံ PDF ထုတ်ပြန်
စစ်​ကောင်စီတပ်အထိနာခဲ့​သော အင်ပင်ထီးရွာ တိုက်ပွဲရုပ်သံ PDF ထုတ်ပြန် ပုလဲမြို့နယ် အင်ပင်ထီးရွာတွင် ယမန်နေ့(ဇန်နဝါရီ ၃၀)က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်ကောင်စီတပ်အထိနာခဲ့သော တိုက်ပွဲ ရုပ်သံကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က ထုတ် ပြန်သည်။ စစ်ကောင်စီတပ်ကပျူစောထီးများအားသင်တန်းပေးနေသောယာယီတပ်စခန်းကို ပုလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ် ရေးတပ်ဖွဲ့( ပ.က.ဖ )နှင့်အတူ ကျားသစ်နက်ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ PRAတပ်ခွဲ ၂၈၊ တပ်ခွဲ ၂၃၊ပုလဲမြေပြန့်ဒေသကာကွယ်ရေးအင်အားစု-PPDG၊ Pale Joker အဖွဲ့တို့က ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြေပြင်တိုက်ပွဲတွင် စစ်​ကောင်စီတပ်အထိနာခဲ့သလို ပိတ်မိ​နေသဖြင့် စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်လေယာဉ် နှစ်စီးဖြင့် […]
တပ်ထောက်ခံသူများကပင်ပြန်လည်လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့ စကစအထူးတပ်တွေရဲ့လူမရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်တဲ့ရုပ်သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်..
တပ်ထောက်ခံသူများကပင်ပြန်လည်လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့ စကစအထူးတပ်တွေရဲ့လူမရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်တဲ့ရုပ်သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်.. တပ္ေထာက္ခံသူမ်ားကပင္ျပန္လည္ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကတဲ့ စကစအထူးတပ္ေတြရဲ့လူမရွိတဲ့အိမ္ကိုဝင္ေရာက္စီးနင္တဲ့႐ုပ္သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင္ၾကည့္ရန္.. တပ်ထောက်ခံသူများကပင်ပြန်လည်လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့ စကစအထူးတပ်တွေရဲ့လူမရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်တဲ့ရုပ်သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်.. တပ္ေထာက္ခံသူမ်ားကပင္ျပန္လည္ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကတဲ့ စကစအထူးတပ္ေတြရဲ့လူမရွိတဲ့အိမ္ကိုဝင္ေရာက္စီးနင္တဲ့႐ုပ္သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင္ၾကည့္ရန္.. တပ်ထောက်ခံသူများကပင်ပြန်လည်လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့ စကစအထူးတပ်တွေရဲ့လူမရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်တဲ့ရုပ်သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်.. တပ္ေထာက္ခံသူမ်ားကပင္ျပန္လည္ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကတဲ့ စကစအထူးတပ္ေတြရဲ့လူမရွိတဲ့အိမ္ကိုဝင္ေရာက္စီးနင္တဲ့႐ုပ္သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင္ၾကည့္ရန္.. တပ်ထောက်ခံသူများကပင်ပြန်လည်လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့ စကစအထူးတပ်တွေရဲ့လူမရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်တဲ့ရုပ်သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်.. တပ္ေထာက္ခံသူမ်ားကပင္ျပန္လည္ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကတဲ့ စကစအထူးတပ္ေတြရဲ့လူမရွိတဲ့အိမ္ကိုဝင္ေရာက္စီးနင္တဲ့႐ုပ္သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင္ၾကည့္ရန္.. တပ်ထောက်ခံသူများကပင်ပြန်လည်လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့ စကစအထူးတပ်တွေရဲ့လူမရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်တဲ့ရုပ်သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်.. တပ္ေထာက္ခံသူမ်ားကပင္ျပန္လည္ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကတဲ့ စကစအထူးတပ္ေတြရဲ့လူမရွိတဲ့အိမ္ကိုဝင္ေရာက္စီးနင္တဲ့႐ုပ္သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင္ၾကည့္ရန္.. တပ်ထောက်ခံသူများကပင်ပြန်လည်လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့ စကစအထူးတပ်တွေရဲ့လူမရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်တဲ့ရုပ်သံ…. ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်.. တပ္ေထာက္ခံသူမ်ားကပင္ျပန္လည္ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကတဲ့ စကစအထူးတပ္ေတြရဲ့လူမရွိတဲ့အိမ္ကိုဝင္ေရာက္စီးနင္တဲ့႐ုပ္သံ…. […]
“ပွဲပြီးမှရဲရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ရဲတွေသေမှ စစ်တပ်ကရောက်လာတာ”
“ပြဲၿပီးမွရဲေရာက္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ရဲေတြေသမွ စစ္တပ္ကေရာက္လာတာ” လို႔ ဆို (စခန္းသိမ္း ႐ုပ္/သံ) ေျမလတ္၊ ဇန္နဝါရီ၃၁၊ ၂၀၂၂။ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လင္းကေတာရဲစခန္းကို ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက္က PDF ေတြ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီးျပန္လာခ်ိန္မွာ ေဒသခံျပည္သူေတြက သေျပခက္ေတြနဲ႔ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ “ပြဲၿပီးမွရဲေရာက္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ရဲေတြေသမွ စစ္တပ္ကေရာက္လာတာ” ၿမိဳင္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာပါတယ္။ Local PDF ေတြကို ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔လိုသလို NUG အေနနဲ႔လည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး လက္နက္တပ္ဆင္ေပးဖို႔ […]
တိုက်ပေါ်ကနေ အပီအပြင် အားပေးနေတာ..
တိုက္ေပၚကေန အပီအျပင္ အားေပးေနတာ.. ေနာက္ဆုံေျပာသြားတာက အသက္…႐ုပ္ေတြကိုက ဘာ႐ုပ္ေတြဆိုလား… တိုက္ေပၚကေန အပီအျပင္ အားေပးေနတာ.. ေနာက္ဆုံေျပာသြားတာက အသက္…႐ုပ္ေတြကိုက ဘာ႐ုပ္ေတြဆိုလား… တိုက္ေပၚကေန အပီအျပင္ အားေပးေနတာ.. ေနာက္ဆုံေျပာသြားတာက အသက္…႐ုပ္ေတြကိုက ဘာ႐ုပ္ေတြဆိုလား… တိုက္ေပၚကေန အပီအျပင္ အားေပးေနတာ.. ေနာက္ဆုံေျပာသြားတာက အသက္…႐ုပ္ေတြကိုက ဘာ႐ုပ္ေတြဆိုလား… တိုက္ေပၚကေန အပီအျပင္ အားေပးေနတာ.. ေနာက္ဆုံေျပာသြားတာက အသက္…႐ုပ္ေတြကိုက ဘာ႐ုပ္ေတြဆိုလား… တိုက္ေပၚကေန အပီအျပင္ အားေပးေနတာ.. ေနာက္ဆုံေျပာသြားတာက အသက္…႐ုပ္ေတြကိုက […]